Mayelana NATHI | Bomvu, Luhlaza okwesibhakabhaka, uViolet, iGreen Laser Pointer | I-Laser - TorLaser.com
I-TorLaser yiphrojekthi ezalwa ngonyaka ka-2009 isuka othandweni lwabalandeli abaningi emhlabeni wonke i-laser, etholakala eTalavera de la Reina (Toledo), Spain.
Kwavela kunesidingo sokunikeza okokukhombisa kwangempela kwe-laser ngentengo efinyelelekayo ukuze noma imuphi amateur abe nomkhiqizo wekhwalithi ephezulu endaweni enhle kakhulu yamandla.
Kuze kube muva nje, ama-lasers ayeyizinto zokunethezeka, ikakhulukazi ezingavamile eziluhlaza okwesibhakabhaka noma eziluhlaza okwesibhakabhaka, ngakho-ke intengo yazo yayitholakala kwabambalwa kuphela.
Ngokuthandwa kwayo nentuthuko entsha yezobuchwepheshe, ukufinyelela kuma-laser poers bekulula futhi kulethe abathengisi abaningi be-inthanethi nabazithandayo abathengise izitolo, kepha baguqula izici zayo namasu eqiniso ukuze kufinyelelwe inzuzo ephezulu.
Okwamanje kulinganiselwa ukuthi ama-99% wama-laser pointers ahlinzekiwe wenziwe ama-forgeries, womabili amandla alo wangempela, uhla kanye nezici zalo eziningi.
I-TorLaser ilwe nalomkhuba ukwazisa bonke abasebenzisi ukuthi bangamakhasimende noma cha, ngobuningi iziqondiso, izichazamazwi zemibandela futhi imininingwane ewusizo ukugwema le mikhonyovu, njengoba kungekho noyedwa ongathanda ukukopela, kepha ngeshwa kwenzeka kaningi kule ndawo.
AMANDLA NEZIQINISEKISO Zangempela
Siqinisekisa ukuthi izici namandla e-lasers ethu real, ngaphandle kokukhohlisa.
Imikhiqizo yethu ingeyekhwalithi ephezulu yokwenza zonke izikhombisi ze-laser zethu, zisebenza kuphela ngemikhiqizo emihle kakhulu nabathengisi bezinto, vele akukho mbumbulu. Siphinde futhi senze ikhwalithi yokulawula emikhakheni yonke ngaphambi kokuthi ithunyelwe ukuzokhipha noma yiziphi izinkinga futhi iqinisekise ukusebenza kahle.
IZITHOMBE NEVidiyo Zangempela
Zonke izithombe namavidiyo wezinto zethu angokoqobo, okubonayo yilokho okutholayo, ngaphandle kwamaqhinga noma isimanga. Ungahlali ngezithombe zekhathalogu ejwayelekile ezisetshenziswa iningi labathengisi nezinye izitolo, ngakho-ke ngeke kube nzima ukwazi ukuthi umphumela ongokoqobo uzonikeza i-laser ngaphambi kokuthenga futhi kungenzeka kakhulu ukuthi ekugcineni ugajeke.
Sithengisa izikhombisi ze-laser kuphela, sikhethekile kuzo ngokuphelele futhi siyabathanda! =). Singakunika izeluleko ezinhle kakhulu kunoma yikuphi ukubonisana ngalolu daba. Izikhombi ze-Laser aziyona into eyodwa esitolo sethu ezithandayo.
Nikeza insizakalo ekuphakameni kwabathengi bethu. Sihle kakhulu ngokucophelela ukukunikeza isipiliyoni esihle kakhulu sokuthenga. Ukwaneliseka kwakho kungumvuzo wethu omuhle kakhulu).
Siyaqiniseka ukunikela ngamanani entengo aphambili emhlabeni kuyo yonke imikhiqizo yethu, sisebenza ngamamephu amancane ukuze sifinyelele amakhasimende amaningi. Nokho, uma uthola inani eliphansi entweni elinezici ezifanayo kwenye indawo, usazise futhi sizoshaya inani, kuqinisekisiwe!
Ngubani othanda ukulinda? Silithatha kakhulu leli phuzu, ngakho-ke sihlala sizama ukukunikeza usizo olusheshayo ngosuku olufanayo, ukulethwa kungakapheli amahora angama-24 kunoma yiliphi izwe nezinkampani zokuhamba ezihamba phambili ... Uzowubona umehluko.
Siyethemba ukuthi sesivele sazi okuthe xaxa, kepha uma ufuna ukuthola olunye ulwazi unganqikazi Xhumana nathi.
Ngokusekelwa nokuthembela kwakho kuzoqhubeka nokusebenza kanzima nsuku zonke ukuze uhlale ungumqingo wekhwalithi, insizakalo nentengo.
Izitho ezinhle kakhulu, Ithimba leTorLaser.com